ပင်နယ်တီ တလုံးမှ မဖမ်းနိုင်ခဲ့တဲ့ ကီပါကို အိမ်စာ ပိုလုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းရင်း ၊ ချဲလ်ဆီး ကြယ်ပွင့် တဦးကို Rolls Royce တိုက်စစ် ကစားသမားလို့ ချီးကျူးလိုက်တဲ့ ပေါလ်မာဆင် - xyznews.co
ပင်နယ်တီ တလုံးမှ မဖမ်းနိုင်ခဲ့တဲ့ ကီပါကို အိမ်စာ ပိုလုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းရင်း ၊ ချဲလ်ဆီး ကြယ်ပွင့် တဦးကို Rolls Royce တိုက်စစ် ကစားသမားလို့ ချီးကျူးလိုက်တဲ့ ပေါလ်မာဆင်
ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့ည က ဝင်ဘလေကွင်းမှာ ကစားခဲ့တဲ့ ကာရာဘောင် ဖလား ဗိုလ်လုပွဲမှာ လီဗာပူး အသင်း ဟာ ချဲလ်ဆီး အသင်းကို ပင်နယ်တီ အဆုံးအဖြတ်မှာ ၁၁ – ၁၀ ရလဒ်နဲ့ အနိုင်ရပြီး ၊ ဗိုလ်စွဲနိုင်ခဲ့ပါတယ် ။
ဒီ ဖိုင်နယ် ဟာ သာမန် ပွဲချိန် မိနစ် ၉၀ နဲ့ အချိန်ပို မိနစ် ၃၀ အတွင်း ဂိုးမရှိ သရေရလဒ် ထွက်ပေါ်ခဲ့တာ မှန်ပေမယ့် ၊ တကယ်တမ်း အပြန်အလှန် ထိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကို ဖျော်ဖြေမှု အပြည့် ပေးခဲ့ပါတယ် ။ ပင်နယ်တီ အဆုံးအဖြတ်မှာတောင် ၂သင်းလုံးရဲ့ ပင်နယ်တီတွေက အရမ်း ကောင်းခဲ့တာကြောင့် ၂ဖက် အသင်း ဂိုးသမားတွေရဲ့ အလှည့် အထိ ရောက်ခဲ့ပါတယ် ။
နောက်ဆုံး ပင်နယ်တီ အဆုံးအဖြတ်မှာ လီဗာပူး ဂိုးသမား ကယ်လီဟာ က ဝင်အောင် ကန်သွင်းနိုင်ခဲ့ပေမယ့် ၊ ပင်နယ်တီ ဖမ်းဖို့ လူစားဝင် ထည့်သွင်းခံခဲ့ရတဲ့ ချဲလ်ဆီး ဂိုးသမား ကီပါ က ယင်း ပင်နယ်တီကို မိုးပေါ် ထောင်ကန်ခဲ့လို့ ၊ လီဗာပူးတို့ ချန်ပီယံ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။
အာဆင်နယ် ကွင်းလယ်လူဟောင်း ပေါလ်မာဆင် ကတော့ ချဲလ်ဆီး နည်းပြ သောမတ်စ် တူချယ်ရဲ့ နည်းစနစ် အရ ဂိုးသမား အပြောင်းအလဲ လုပ်ခဲ့ခြင်း အပေါ် မေးခွန်းထုတ်ရင်း ၊ ကီပါ ရဲ့ ပင်နယ်တီ ဖမ်းပုံတွေ အပေါ် ဝေဖန်ခဲ့ကာ ၊ သူ့အနေနဲ့ အိမ်စာ ကြေညက်အောင် မလုပ်လာခဲ့ဘူးလို့ သုံးသပ်ခဲ့ပါတယ် ။
ပေါလ်မာဆင် က ” ခင်ဗျားဟာ ပွဲမစခင် က ပြင်ဆင်ထားတဲ့ လူစားလဲမှု တခုကို ပွဲချိန် အတွင်း အခြေအနေနဲ့ ချိန်ထိုးပြီး ဆုံးဖြတ်ဖို့ ဆိုတာ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ချဉ်းကပ်မှု တခု ဖြစ်တယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်ပါတယ် ။ ဒါဟာ ချဲလ်ဆီး အတွက် မန်ဒီ ကစားပေးခဲ့တဲ့ အကောင်းဆုံးပွဲလို့ ကျွန်တော် ယူဆပါတယ် ။ ”
” ဒီတော့ ခင်ဗျားဟာ ပင်နယ်တီ အဆုံးအဖြတ် အတွက် ဂိုးသမား ဘာလို့ အပြောင်းအလဲ လုပ်မှာလဲ ? သူဟာ ကစားသမား ဘဝရဲ့ အကောင်းဆုံးပွဲကို ဖြတ်သန်းထားပြီး ၊ လီဗာပူး ကစားသမားတွေကလည်း သူ့ကိုကျော်ပြီး ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိပါဘူး ။ ဒါကို ခင်ဗျားက အပြောင်းအလဲ လုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ပေါ့ ? ”
” ပွဲအပြီး ဘာညာ ပြန်ဖြေရှင်းဖို့က လွယ်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ပင်နယ်တီ အဆုံးအဖြတ်ကို ရောက်လာတဲ့ အခါ ဖိအားမရှိတဲ့သူ က ဂိုးသမား ဖြစ်ပါတယ် ။ ဂိုးသမားတွေမှာ ပင်နယ်တီ အဆုံးအဖြတ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာဆုံးရှုံးစရာမှ မရှိပါဘူး ။ အဆုံးသတ် ကန်သွင်းသူတွေကသာ တကယ် ဖိအားထမ်းထားရသူတွေ ဖြစ်ပါတယ် ။ ”
” ကီပါလည်း လူစားဝင်လာရော ၊ ပင်နယ်တီ အဆုံးအဖြတ် အတွက် အခြေအနေ က ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ် ။ ဖိအားတွေက သူ့အပေါ်သာ ကျခဲ့ပြီး ၊ ကျန်တဲ့ အသင်းသားတွေမှာ မရှိတော့ပါဘူး ။ ဒါက ပြဿနာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။ ဒါမျိုး လွန်ခဲ့တဲ့ ၃နှစ် လိဂ်ဖလား ဗိုလ်လုပွဲမှာ လူစားလဲခံဖို့ ငြင်းဆန်ခဲ့တုန်းက သူ တခါ ကြုံခဲ့ပြီးပါပြီ ။ ”
” အဲဒီတုန်းကလည်း သူ ဖိအား ထမ်းခဲ့ရပြီး ၊ ချဲလ်ဆီးတို့ ပင်နယ်တီ အဆုံးအဖြတ်မှာ အရေးနိမ့်ခဲ့ပါတယ် ။ ဒီနေ့မှာလည်း ထိုနည်း၄င်းပါပဲ ။ ဒါကို ကျွန်တော် ဘယ်လိုမှ နားမလည်နိုင်ပါဘူး ။ အကယ်၍ ချဲလ်ဆီးသာ မန်ဒီကို ပင်နယ်တီ ဆက်ဖမ်းခိုင်းခဲ့မယ်ဆိုရင် ၊ သူတို့တောင် အနိုင်သွားနိုင်ပါတယ် ။ ”
” ဒီပွဲမှာ ကီပါ ပင်နယ်တီ ကာကွယ်ဖို့ နီးစပ်ခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ အခိုက်အတန့်တောင် ကျွန်တော် ရှာမတွေ့မိပါဘူး ။ ဆာလာ ဟာ ပင်နယ်တီ ကန်တိုင်း ၊ ဘယ်ဖက်ပဲ သွင်းလေ့ရှိတာတောင် ၊ သူ ညာဖက်ကို ဒိုင်ဗင်ပစ်ခဲ့ပါတယ် ။ ဗန်ဒိုက် ပင်နယ်တီမှာလည်း သူဟာ ဂိုးရဲ့ တဖက်ခြမ်းမှာ ရှိနေခဲ့ပြီး ၊ လှုပ်တောင်လှုပ်ခဲ့ပုံ မပေါ်ပါဘူး ။ ”
” ခင်ဗျား ရင်ဆိုင်ရမယ့် ကလပ်ရဲ့ အထာကို ပွဲမစခင်ကတည်းက ကြေကြေညက်ညက် သိထားသင့်ပါတယ် ။ သူ့အနေနဲ့ အိမ်စာကြေခဲ့ဖို့ ကောင်းပါတယ် ။ ” လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ် ။ ဆက်လက်ပြီး ပေါလ်မာဆင် က လီဗာပူးနဲ့ ပွဲမှာ မိနစ် ၁၂၀ အပြည့် ကစားကာ ခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့ ဂျာမန် လက်ရွေးစင် ကွင်းလယ် တိုက်စစ် ကစားသမား ကိုင်ဟာဗက်ဇ်ကိုလည်း Rolls Royce ကားနဲ့ ခိုင်းနှိုင်းကာ အခုလိုပဲ ချီးကျူးသွားခဲ့ပါတယ် ။
ပေါလ်မာဆင် က ” ဟာဗက်ဇ် ဟာ ဒီလို ပွဲကြီးတွေမှာ မပါမဖြစ် ကစားရမယ့်သူပါ ။ သူဟာ ချဲလ်ဆီးရဲ့ အကောင်းဆုံး ကစားသမားတွေထဲက တဦးပါ ။ သူဟာ ထိပ်တန်း အဆင့် ရှိတယ် ဆိုတာကို လူတွေက မေ့နေကြပါတယ် ။ သူဟာ အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်ကို တစုတစည်းတည်း ဖြစ်စေဖို့ ပုံဖော်ပေးပါတယ် ။ ”
” သူဟာ Rolls Royce ကားတစီးလိုပါပဲ ။ သူဟာ ကွင်းရဲ့ နေရာစုံမှာ ပြေးလွှား ကစားပေးနိုင်ပါတယ် ။ ခပ်မြန်မြန် ဟိုလှုပ်ဒီလှုပ် ကစားတတ်သူ မဟုတ်ပါဘူး ။ လူတွေက သူ့ကို ပျင်းရိလွန်းတဲ့ ကစားသမားလို့ ထင်ကြပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် သူဟာ မတူညီတဲ့ ခြေစွမ်း အဆင့် တရပ်မှာ ရှိနေပြီး ၊ လက်ရှိ ချဲလ်ဆီး တိုက်စစ်မှာ အမြဲ ပါဝင်ရမယ့် ကစားသမား ဖြစ်ပါတယ် ။ ” လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ် ။
Previous Article မန်စီးတီး နဲ့ ပွဲမှာ အဲဗာတန် ကို ပင်နယ်တီ မပေးခဲ့မိလို့ တရားဝင် တောင်းပန်လိုက်တဲ့ ဒိုင်လူကြီးများ အဖွဲ့ချုပ်
Next Article စိတ်မကျေမနပ် ဖြစ်ခဲ့ရကြောင်း ၊ စိတ်ပျက်ခဲ့ရကြောင်း ဝန်ခံဖွင့်ဟလိုက်တဲ့ ဗန်ဒီ ဘိခ်